Ukwenziwa Kweminye Imisebenzi Yabangasekho Ekhaya – The Ulwazi Programme
Ukwenziwa Kweminye Imisebenzi Yabangasekho Ekhaya
Izimpawu Zokuthi Kufanele Kwenziwe Umsebenzi
Ziningi izimpawu abantu abakholelwa kuzona ukuthi zivela kwabaphansi njengokuthi:
Umuntu ongasekho ubefika ngephupho emndenini wakhe uma esefuna umsebenzi lowo noma kukhona afuna ukukukhuluma nabo. Isikhathi esiningi ufika acele itiye, omunye athi ulambile omunye uma washona wangatholwa achaze ephusheni ukuthi ulaphi, noma ngabe uzobaxwayisa ngesehlo esingabavelela okubi noma okuhle.
Kokunye uma engafikanga ngephupho bekuyaye kugule umuntu ekhaya kuthi noma kuzanywa usizo angasizakali. Umndeni uze uyohlola ezangomeni noma kubathandazi nekuyilapho abazothola khona ukuthi imbangela yokugula yenziwa umuntu ongasekho emhlabeni wasekhaya futhi ufunani.
Abangasekho bayakwazi nokuxhumana nabaphilayo ngemfuyo njengokuthi bayibone yenza okungajwayelekile, mhlawumbe ibuye emadlelweni iziginqe esibayeni noma egcekeni ngesinye isikhathi ilahleke. Nalapho kuyaye kusize abantu abadala abazaziyo izinto ukuthi zichazani uma engekho owaziyo kusiza bona abantu ababonayo ukubakhanyisela abomndeni ngekufanele bakwenze.
Okokuqala Ekufanele Umndeni Ukwenze
Umndeni uma usuyitholile incazelo lesosigameko siyadlula nemfuyo ebilahlekile itholakale ngoba abangasekho sebewudlulisile umyalezo wabo basuke sebelindele ukuthi kwenziwe njengokufisa kwabo. Emzini lowo into yokuqala ekufanele bayenze ukuthi bashise impepho bashweleza bese bethembise noma bazibophezele kwabangasekho ukuthi bazokwenza lokho obekufuneka.
Kubalulekile kakhulu ukuthi umndeni uma uzokwenza umsebenzi womuntu noma abantu abangasekho bawenze ngokulandelana kwendlela abahamba ngayo emhlabeni. Kodwa uma kungukuthi ikhanda lomuzi lashona ekugcineni noma kanjani lona kufanele lenzelwe kuqala kunabo bonke abanye.
Imizi nemizi iyahluka ngamasiko ayo, kweminye ubaba womuzi wenzelwa imisebenzi emibili, kuye kube owokumbuyisa ekhaya, bese kuba owokugeza izikhali. Ngokwesiko uma kuhambe umnumzane wekhaya besingaphakanyiswa isikhali njengezinduku namahawu. Ngisho ukugiya abantu bomndeni abavumelekile ukukwenza kuze kube kugezwa izikhali. Izinduku namahawu kusuke kubekiwe kuze kube ziyakhululwa ngalomsebenzi uma sekukhishwa nezimpahla zakhe ubaba. Kumama wekhaya awukho umcikilisho kakhulu kuyena wenzelwa umsebenzi wokumbuyisa kuphela.
Ingane yentombazane ekhaya kubo ibekelwa izinkomo ezimbili eyokuyikhulisa noma eyokuyemulisa kanye neyokuyincamisa uma isiyogana. Ngalokho ayikho inkomo ehlatshwayo uma intombazane isishonile noma awukho umbuyiso wentombazane kubo. Uma idlula emhlabeni ingakashadi yenzelwa umsebenzi wembuzi kuphela. Phela yona isuke izokwenzelwa emzini wayo umsebenzi wokuyibuyisa uma ishone seyiganile.
Kukhona abakholelwa ukuthi uma intombazane ishone ingakenzelwa umemulo bangayenzela ngemuva kwesikhathi esithile isingcwatshiwe ukugcina isiko. Ngosuku lwalowomsebenzi kubo kantombazane kukhethwa intombazane ezomela noma ezobambela leyo engasekho kukho konke okuzokwenzeka, njengokugida nokunye. Kubalulekile ukuthi kube intombazane esesigabeni esilinganayo naleyo eyenzelwa lowomsebenzi. Njengokuthi uma ibisayintombi nto noma isinengane, kuthathwe umuntu ofanayo womndeni.
Umndeni ushisa impepho emsamo kukhulunywe nabangasekho naye umnikazi womsebenzi aziswe ukuthi usibanibani uyena ozombambela indawo yakhe. Njengokwesiko uma kwemulwa intombazane ichonywa imali ekhanda, imali achonywa yona osinayo kuba ngeyakhe. Kuthi leyo eqoqwe ngesikhathi beshaya ingewuwu kuthengwa ngayo ukudla kwezintombi ebezigonqile kulowo muzi. Nomkhonto ulandwe komalume. Umuntu wesifazane kulindeleke ukuthi agane uma usengena esigabeni esifanele yingakho engenzelwa lomsebenzi omkhulu wokubuyiswa uma eshone engaganile.
Umfana kubo uyenzelwa kugcinwe konke okumele kwenziwe njengomsebenzi wokubuyiswa, eganiwe noma engaganiwe.
Kuyenzeka uma umndeni umkhulu kwenziwe imisebenzi ehlukene yokhokho njengokucela kwabo kumalunga omndeni. Lokhu akunasici noma akunawo umthelela omubi ngoba umuntu usuke azi ukuthi uzothola izinhlanhla zokhokho bakhe uma enza njengoba besho.
Traditional ceremonies associated with death especially one year ceremony are mainly done for men. Only married women can be recognised or can be acknowledged. A goat will be slaughtered for a girl if she died unmarried. Umemulo or coming of age ceremony can also be done after the girl has died by those who believe in it. The family chooses a female representative among family members who is of the same age as the deceased to stand in for her, but it is important for the family to inform the ancestors about that arrangement.
Categories Culture Tags Death, Ekhaya, Home, Imicimbi yesintu, Traditional Ceremonies, Ukufa
1 thought on “Ukwenziwa Kweminye Imisebenzi Yabangasekho Ekhaya”
Kugezwa kanjani uma umfelokazi eshonelwe egane kwabangawenzi amasiko kodwa sekucaca ukuthi kudingeka lona lelisiko lokugezwa, izinto azihambi kahle izngane zivelelwa amashwa